Reuben Yonatan's Articles on Martech Zone |
Zvinyorwa na Rubheni Yonatan
Reuben Yonatan ndiye muvambi uye CEO we GetVoIP, VoIP yekuenzanisa sosi inobatsira makambani kunzwisisa uye kusarudza bhizinesi rekukurukurirana mhinduro kune avo chaiwo zvavanoda. Reuben anobatsira maSMB kuwiriranisa bhizinesi zano netsika uye kugadzirisa hupfumi hwese hwese. Mutevere pa Twitter @ReubenYonatan
Maitiro ekudzikisa Mutengi Wako Wekutora Mutengo weMaxim ROI
Chipiri, Gunyana 26, 2021 Chipiri, Gunyana 26, 2021 Rubheni Yonatan
Paunenge uchangotanga bhizinesi, zvinokwezva kukwezva vatengi nechero nzira yaunogona, zvisinei nemutengo, nguva, kana simba rinobatanidzwa. Nekudaro, paunodzidza nekukura unozoona kuti kuyera mutengo wekutenga kwevatengi neROI kwakakosha. Kuti uite izvozvo, iwe unofanirwa kuziva yako mutengi acquisition mutengo (CAC). Maitiro eKuverengera Mutengi Wekutora Mutengi Kuti uverenge CAC, unongoda kupatsanura zvese zvinotengeswa uye